သင်၏ဓါတ်ပုံများကို Polaroid လျှပ်တစ်ပြက်အဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း Gadget သတင်း
ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးရှိသောကင်မရာကိုသယ်ဆောင်ထားပြီးသန်းပေါင်းများစွာသော pixels များကိုရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်း၏မှတ်ဉာဏ်တွင်ဒီဂျစ်တယ်သိုလှောင်ထားခြင်းကိုသက်တောင့်သက်သာသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကဇာတ်လမ်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုတီထွင်ရန်လိုအပ်သည်။
ဒါပေမယ့်အချိန်အားဖြင့် Polaroid လက်ငင်းကင်မရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံကိုရိုက်နေချိန်မှာပေါ့ ငါအတူတူကင်မရာကနေပုံနှိပ်ခဲ့သည်ပုံရိပ်များကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းသာလက်ခံနိုင်ပြီးလက်ခံနိုင်လောက်သောအရည်အသွေးဖြင့်ရရှိခြင်း။ ယနေ့တွင်လူမှုကွန်ယက်များအထူးသဖြင့် Instagram နှင့်စပျစ်သီးနယ်ပယ်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်အတူဤ,ရိယာ၌ပြန်လာနေသည် လက်ငင်းကင်မရာများ popularize ထို့အပြင် Polaroids ကိုမလွဲမသွေသတိရစေသည့်အဖြူရောင်ဘောင်ပါရှိသည့်ပုံမှန်စက္ကူဓာတ်ပုံများ။ သင်တို့မူကားသိကြ သင် Polaroid ဖြင့်ခေါ်ယူခဲ့သည့်ပုံနှင့်တူသည့်မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမဆိုပြောင်းလဲနိုင်သည်? အပေါ်ဖတ်ပါနှင့်မည်သို့ထွက်ရှာပါ။
အဖြူရောင်အနားကအာရုံကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ယနေ့သူတို့သည်လည်း ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ သင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံကိုအများဆုံးဖြစ်လိုလျှင် အေးချမ်းသော နှင့်အများဆုံး retro သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် Polaroid နှင့်ခေါ်ယူလိုက်သကဲ့သို့ကြည့်ရလိမ့်မည်။ ဒုတိယအသုံးအဆောင်အချို့သည်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေနှင့်သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရှာတွေ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဤကဲ့သို့သောလက်ငင်းကင်မရာကိုမတတ်နိုင်ကြပါ။ ဒါဆိုရှင်းပြပါရစေ သင်၏နေ့စဉ်ဓါတ်ပုံများကိုအကောင်းဆုံး Polaroids မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း,
1 Polaroid ရုပ်ပုံ
3 Instantizer ပါ
ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်မှုထက်ပိုသော Polaroid ရုပ်ပုံ ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် အဆိုပါ Polaroid အကျိုးသက်ရောက်မှုသက်ဆိုင်ပါသည်, အဖြူရောင်နယ်စပ်နှင့်လျှပ်တစ်ပြက်၏ပုံမှန်အောက်ခြေအာကာသနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ဒါဟာလှည့်ကွက်ပေးနိုင်ခြင်း။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည့်ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့ပုံကို upload လုပ်ပါနှင့်၎င်းသည် Polaroid ဓာတ်ပုံစက္ကူကိုတုပသည့် frame ထဲသို့အလိုအလျောက်ပါဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
အပေါ်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဓာတ်ပုံတင်လိုက်တာနဲ့ငါတို့လုပ်နိုင်မှာပါ စာတန်းတစ်ခုထည့်ပါ (မြှားနီ) ကဲ့သို့သောအရာများကိုညှိပါ တောက်ပမှု, ရွှဲ, အရောင်, ဒါမှမဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် အရွယ်အစားပြောင်းလဲပါစာသားထည့်ပါသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံလှည့်ပါ (အပြာရောင်မြှား) နှင့် ဓာတ်ပုံကိုသိမ်းဆည်းပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာ (သို့) လက်ကိုင်ဖုန်းပေါ်မှာ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရရှိသော parameters များကိုချိန်ညှိနိုင်သည် တစ်ခုချင်းစီ၏အရသာမှလုံးဝရလဒ်။
နာမည်ကလှည့်စားခံနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်အန်ဒရွိုက်စက်များအတွက်အသုံးချခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအစကတည်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရအောင်။ Poladroid ဆိုတာငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့ program တစ်ခုပါ ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ download လုပ်ပါ tanto Windows နဲ့ Mac OS အတွက်။ သူ့ရဲ့လည်ပတ်မှုကအရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဒါကိုတစ်ကြိမ်သာ install လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ၎င်း၏အကြီးအအားသာချက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ပါ တစ်ချိန်က installed function ကိုရန်။
ပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်လိုက်သောအခါ Polaroid ကင်မရာ၏ပုံသဏ္inာန်၌ရေပေါ်ပြတင်းပေါက်ငယ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် ပုံကိုဆွဲယူပါ ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုပြောင်းချင်တယ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျှောက်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်နည်းနည်းနှေးသော်လည်း၎င်းသည်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ တီထွင်ထားသောပုံရိပ်ကိုပြသရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှကြာသည် 100% ရန်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်တွင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်းညွှန်ပြရန်ဖဲနီနီပေါ်လာလိမ့်မည် ဒါကို download folder ထဲမှာတွေ့နိုင်တယ်။ ဤအစီအစဉ်၏ကြီးမားသောအားသာချက်မှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင်ဓာတ်ပုံဆယ်ပုံပါရှိသည်။
နောက်ထပ် website တစ်ခုသုံးရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည် မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ Instantizer ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမကိစ္စမှာလိုပဲ၊ ဝက်ဘ်ကိုသုံးပါ, ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို select ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့အပြာရောင် (အပြာရောင်မြှား) ဖော်ပြချက်အချို့ကိုထည့်ပါ o ဓာတ်ပုံကိုလှည့် အထူးဒီဂရီအရေအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားသောရွေးစရာများကိုရွေးချယ်ပြီးမှသာကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည် ဓါတ်ပုံတင်ပါ ရုပ်ပုံတင်ခြင်း (အစိမ်းရောင်မြှား) ခလုတ်ကို အသုံးပြု၍၊ ငါတို့ Polaroid ပုံစံသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်.
ဒီပုံ ငါတို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ (သို့) မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယ်တိုင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့အားaအဲဒါကိုတိုက်ရိုက် link ကို သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်မျှဝေရန် ၂၄ နာရီကြာသည်။ ပထမဆုံး ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ခြားနားချက်မှာ ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံတွင်ပိုမိုရှားပါးသောကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံ၏ထောင့်ကိုသာပြုပြင်နိုင်ပြီးဖော်ပြချက်တစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးအလွန်မှန်ကန်သည်ဒီလူတိုင်းရဲ့အရသာမှပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း, က Polaroid အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှောက်ထားရန်အလွန်လွယ်ကူသည် တ ဦး တည်းမရှိခြင်းသို့မဟုတ်လက်ငင်းကင်မရာဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းမရှိဘဲပုံရိပ်တစ်ခုသို့။ ဖြစ်စေဘို့ လူမှုမီဒီယာပေါ်တွင်တင်ရန်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်မျှဝေပါ သင်၏ပုံစာကြည့်တိုက်သို့သိမ်းပါသင်၏ဓါတ်ပုံများကိုမည်သို့ပြုပြင်မွမ်းမံသည်ကိုသိရန်ဘယ်တော့မျှမနာပါ ပိုပြီး retro ရလဒ်ကိုရယူပါမကြာသေးမီကပုံရိပ်များကိုပင်ပြုလုပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » သင်၏ဓါတ်ပုံများကို Polaroid လျှပ်တစ်ပြက်အဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း